Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 05/12/2020)
Ny University of Rostock dia iray amin'ireo oniversite alemà amin'ny tena isan-karazany ny lohahevitra. Manolotra mihoatra noho ny 100 antokony: 34 farany miaraka amin'ny bakalorea, 56 amin'ny mari-pahaizana maîtrise, 37 (anisan'izany ny mpampianatra) miaraka amin'ny fanadinam-panjakana, ary 3 amin'ny Ph.D. koa, ny Center for Mpampianatra Fampiofanana sy Fanabeazana Research dia tsy mitarika fotsiny fa koa fikarohana fanabeazana miasa amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanofanana mpampianatra.
Te-hahafantatra ny fomba hahazoana ny iray amin'ireo Mahavariana indrindra Anjerimanontolo In Eoropa? Na inona na inona tari-dalana ianao nandeha avy amin'ny (e.g. Rostock na Schwerin, Berlin na Hamburg), handray ny fiaran-dalamby ambara-pahatratranao Wismar garan'i. avy eto, ianao dia afaka misambotra ny fiara fitateram-bahoaka ny fiara fitateram-bahoaka-mijanona ao J.-R.-Bakera-Strasse amin'ny alalan'ny fampiasana andalana 4 na G (mankany Ostseeblick) na B-D (mankany Seebad Wendorf). Izany dia iray ihany minitra mandeha amin'ny fiara fitateram-bahoaka ity-stop manerana ny fiara zaridaina ny Campus.